AI (Artificial Intelligence) ဆိုတာ ဘာလည်း ? - Thetys
AI (Artificial Intelligence) ဆိုတာ ဘာလည်း ?
AI ဆိုတာ ဘာလဲ
အရှည်ကောက်က Artificial Intelligence ပါ။ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရင် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ အသိဉာဏ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ Artificial Intelligence ဆိုတာ အလိုအလျှောက်သင်ယူ လေ့လာနိုင်အောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Machine-learning Algorithm တွေသုံးပြီး deep learning စနစ်နဲ့ သင်ယူနိုင်အောင် ရေးဆွဲထားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူသားတွေမှာ ဦးနှောက်ရှိသလို စဉ်းစား တွေးခေါ် သင်ယူနိုင်သလို AI ကလည်း ကွန်ပျူတာရဲ့ ဦးနှောက်လို့ ပြောရမှာပါ။
အလိုအလျောက် သင်ယူနိုင်တယ် လို့ဆိုပေမယ့် အချို့အရာတွေကို (ဥပမာစစ်တုရင် ထိုးခြင်း ဂိမ်းကစားခြင်းစတဲ့အရာတွေကို) လူသားတွေက လေ့ကျင့် ပေးရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့် သင်ကြားပြီးသွားရင်တော့ လူသားတွေ လုပ်တာထက် အလွန် ကောင်းမွန်တဲ့ result တွေကို ထုတ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
အထောက်အကူ ပြုပေးထားတဲ့ စနစ်က ဟိုးအောက်ခြေက သာမန် AI အဆင့်လေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အင်တာနက်ကနေ အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုချင်လို့ဘဲ ဖြစ်စေ ၊ Youtube တို့ Netflix တို့ကနေ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ရှုတာဘဲ ဖြစ်စေ ၊ Amazon လိုမျိုး အွန်လိုင်းကနေ စျေးဝယ်ယူတာမျိုး ဖြစ်စေ အစရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ချက် တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ Artificial Intelligence ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ပစ်မှတ်ထား ကြော်ငြာခြင်း (Targeted Advertising) တို့ ၊ Recommended Videos ဆိုတာတွေ ပေါ်လာပြီး အစီအစဉ်ကျတဲ့ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေ ဖြစ်လာတာပါ။
Artificial Intelligence နည်းပညာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
Artificial Intelligence နည်းပညာကို အဓိက အသုံးပြုနေတဲ့ နေရာကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စက်ရုပ် တွေမှာပါ။ နောက်ပိုင်း စက်ရုပ်တွေ ဟာ ဟိုးအရင်က စက်ရုပ်တွေ လို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ အလုပ်တစ်ခုခုကိုပဲ လုပ်နေတာမျိုး မဟုတ်တော့ ပါဘူး။
အခုနောက်ပိုင်း စက်ရုပ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်နှာပေါ်က စိတ်ခံစားမှုများ တွေကို သိရှိနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ရယ်ပြတာ၊ ပြုံးပြတာ၊ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးလုပ်ပေးတဲ့ စက်ရုပ်လေးတွေ ၊ ဧည့်ကြိုလုပ်ပေးတဲ့ စက်ရုပ်လေးတွေ ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူ Chess ထိုးမယ်။
ဒါမှမဟုတ် တူတူစာဖတ်မယ့် အဖော်ပြုဖို့ စက်ရုပ်တွေ ထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ ဒီလိုမျိုး စက်ရုပ်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း စက်ရုပ်လေးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
အိမ်သုံး စက်ရုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း တံမြက်စည်း လှည်းမယ်၊ ဖုန်သုတ်မယ်၊ ဒါ့အပြင် ကိုယ်မအားတဲ့ အချိန် ကိုယ့်သားသမီးတွေကိုလည်း ကူထိန်းပေးခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ ထွန်းကားလာတဲ့ Artificial Intelligence နည်းပညာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။
Artificial Intelligence နည်းပညာနဲ့ တီထွင်ထားတဲ့ စက်တွေကို လက်ရှိမှာ ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးနေပါသလဲဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သုံးနေတဲ့ မောင်းသူမဲ့ ကားတွေ၊ ဒရုံးယာဉ်တွေဟာ Artificial Intelligence ကို သုံးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာ ထောင်ချီထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကားတွေအတွက် ဂဟေဆော်တာ၊ စက်တွေ ဆင်တာ၊ အင်ဂျင်တင်တာတွေကို စက်ရုပ်တွေနဲ့ လုပ်ပေးနေပါ။
ဒါ့အပြင် နာမကျန်း ဖြစ်နေသူတွေ၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ နေ့စဉ်သွားလာ လှုပ်ရှားရေးမှာ လိုအပ်တာကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် သူနာပြု စက်ရုပ်တွေကို စသုံးနေပါပြီ။
တကယ်လို့ အိမ်မီးလောင်နေချိန်မှာ မီးသတ်သမား ဝင်လို့မရဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အထဲမှာ လူနဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ ဘယ်နေရာမှာ ကျန်နေတယ် ဆိုတာကို စက်ရုပ်တွေ လွှတ်ပြီး ရှာဖွေ ကယ်တင်ပေးနိုင်ပါပြီ။
ဒါဟာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်လှတဲ့ နည်းပညာ တိုးတက်မှုပါ။ အခုခေတ်မှာ AI ကြောင့် တိုးတက်လာတဲ့ နောက်တခုက ဘာသာပြန်တဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာကို ခလုပ် နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မြန်မာလို ပြန်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာဟာ AI နည်းပညာကို သုံးထားတာပါ။
ဒါ့တွေအပြင် ကယ်ဆယ်ကူညီရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ စူးစမ်း ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ဒီနည်းပညာဟာ သိပ်ကို အရေး ပါပါတယ်။
ဒီ နည်းပညာ နဲ့ တခြား ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တွေက ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် တစ်ခုချင်းစီကို သတ်မှတ်ပေးရ ပြီး Artificial Intelligence မှာကတော့ လူတွေက သင်ပေးသမျှကို သင်ယူနိုင်တဲ့ Machine Learning အပြင် သူကိုယ်တိုင် လေ့လာ သင်ယူရတဲ့ Deep Learning တွေ ပါလာပါပြီ။
Thetys Co Ltd
Thet Paing Phyo2020-07-22T09:48:16+00:00